"I dere akwụkwọ a", 78 okike ịma aka ịma aka | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
«Akwụkwọ a bụ nke ị dere», 78 okike ịma aka ederede
A na-ere akwụkwọ na-adọrọ mmasị n'ezie echi. Dịka m maara na ọtụtụ ndị na-agụ blọgụ a bụ ndị edemede, ndị na-achọsi ike ide akwụkwọ ma ọ bụ, ọbụlagodi, nwere nchegbu ederede dị ka ndị okike, echere m na ị ga-ahụ akwụkwọ a n'anya. Enwere m ya edebe ya. Ọ bụ ihe Ọ bụ gị dere akwụkwọ a, na Carlos Garcia Mirandana Spain, akwụkwọ nwere 78 ihe ịma aka ederede nke mbụ, akwụkwọ dị na akwụkwọ mmekọrịta mmekọrịta na-aga nke ọma nke na-akwalite okike, ebe onye na-agụ ya na-arụsi ọrụ ike iji mezue mmemme ndị akwụkwọ ahụ na-atụ aro.
Kedu ihe ọzọ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị chetụbeghị ederede, ana m akwado ka ị zụta ma jiri ya egwu. M na-ekwu kpọọ n'ihi na, dị ka ị ga-ahụ, amụma ndị ahụ na-atọ ezigbo ụtọ. I so ha ga-amata na ị ga-eji ihe ị na-agụ kpọrọ ihe nke ukwuu.
Gịnị bụ «Ọ bụ gị dere akwụkwọ a»
Write dee akwụkwọ a tú bụ akwụkwọ ndetu iji mepụta ihe imepụta ihe site na-atọ ọchị ma na-akpali akpali ide omume. Ọ na-atụ aro ka ị mepụta ihe odide gị, na ị mepụta mkparịta ụka na-agaghị ekwe omume, na ị na-akọwagharị akụkọ ifo, na ị na-azụ asụsụ gị ma mepụta ọhụụ gị.
Jidere a pensụl, nchicha, a di na nwunye nke acha itienna na ... jikere ide, ise, na-eche, ike, na n'elu ihe nile na-enye free rein ndị echiche na-adịbu na isi gị fọrọ nke nta na-enweghị ị maara ya. Site n'ime nke a ị ga-ekpori ndụ, ị ga-ata ahụhụ, na-achị ọchị, na-akwa ákwá ... you mara? Nweta ihe okike ị nwere n’ime!
You pụrụ ịhụ peeji nke mbụ nke Ọ bụ gị dere akwụkwọ a ebe a
Banyere Carlos García Miranda
Carlos García Miranda bụ onye ama ama na-ede akụkọ telivishọn na-ekele maka usoro ndị dị ka Ọnọdụ (rere ya karịa mba 30), Ndị Na-echebeya mere Ndụ abụ. Onye edemede nke Ejikọtara na Njikọ, bipụtara na Akara Aka, ọ na - ede blog banyere akwụkwọ na Huffington Post.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » «Akwụkwọ a bụ nke ị dere», 78 okike ịma aka ederede
Ndewo, akwụkwọ a ga-abata na Peru
Slim Leybian dijo
Ndewo ekele site na Panama City. Aga m agwa gị ọsọ ọsọ m bụ onye edemede, n'ezie enwere m nsụpe ọjọọ. Ma afọ gara aga echiche nke ịme akụkọ 5 maka ụmụaka ebe m chọrọ igosipụta ụkpụrụ dịka nkwanye ugwu, ekele, n'ikpeazụ, emere m mmadụ abụọ amụrụ n'otu ụbọchị ha dị mkpụmkpụ, enweghị m ndụmọdụ. Nke ahụ bụ ịsị, ọ dịghị onye ga-eduzi m, m ga-achọ onye ga-eduzi m ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ gwa m na nke a bụ ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ. Na eziokwu bụ na enwere m nnukwu agụụ maka ịme ha, otu ka a na-akpọ Ugbo Lola, nke ọzọ ka ana-akpọ Soledad Rabbit.Achọrọ m ịmụ, ọtụtụ ihe m nwere afọ iri ise na asaa, agụm akwụkwọ ole na ole na ego anaghị ekwu ihe ọ bụla n'akpa m kama Achọrọ m nrọ m .fulfill.thank gị maka ịkekọrịta ahụmịhe gị. Chukwu gozie gị
Zaghachi Leybian Slim
26 Oscar meriri na DC na-emegharị ọchị